Wax ka baro atirishooyinka Koonfur Hindiya lacagaha ugu badan ku sameeyaan Anushka Shetty, Nayanthara, Samantha Ruth Prabhu, Trisha – Filimside.net
Wax ka baro atirishooyinka Koonfur Hindiya lacagaha ugu badan ku sameeyaan Anushka Shetty, Nayanthara, Samantha Ruth Prabhu, Trisha
February 14, 2019 Jabriil Abdikadir
Taariikhda: February 14, 2019
Fanka Koonfurta Hindiya wuxuu sameenayaa sare u kac joogto ah sidoo kalena isbadal ayaa ku yimid nidaamka awooda Koonfurta madaama hada daawadayaasha bilaabeen inay aqbalaan daawadayaasha filimada atirishooyinka hogaamiye ka yihiin.
Inta badan xeerka Koonfurta wuxuu ahaan jiray awooda atooraha in la wada siiy halka atirishooyinka filimada door kooban ku yeeshaan.
Laakiin atirishooyin awood leh ayaa hada soo baxeen oo xitaa atoorayaasha caanka ah caawiyaal u noqonayaan filimada ay hogaamiyaha ka yihiin waxaana atirishooyinka ugu awood badan Anushka Shetty.
Anushka Shetty awoodeeda waxay kusii xajisatay kadib markii u guuleystayn dhawr filim ee ugu dambeeyay kuwaaso kala ah baahubali 2 iyo Bhaagamathie iyadoo hogaaminayso liiska atariishooyinka ugu mushaarka badan dhanka iyo koonfurta.
Fadlan hoos kaga bogo atirishooyinka Koonfur Hindiya filimada lacagaha ugu badan ku sameeyaan:
Anushka Shetty: filimka ay hogaamiyaha ka tahay 4 Crore ayay ku qaadataa sameyntiisa halka filim atoore weyn kula jiro sameyntiisa 2 Crore ilaa 2.25 Crore ku qaadato.
Nayanthara: filimka ay hogaamiyaha ka tahay 3 Crore ayay ku qaadataa sameyntiisa halka filim atoore weyn kula jiro sameyntiisa 1 Crore ilaa 1.50 Crore ku qaadato.
Samantha Ruth Prabhu: Halkii filim sameyntiisa waxay ku qaadataa 1 Crore ilaa 1.25 Crore balse waa qasab in sicirkeeda suuqa sare u qaadi doonto madaama aflaamteeda ugu dambeeyay ganacsi wacan ay sameeyeen sida Raju Gari Gadhi 2 , Mersal, rangasthalam kuwaaso Boxoffice-ka ganacsi wacan ka sameeyeen.
Trisha: Inka badan 15-sano ayay fanka Koonfurta ka tirsan tahay waxayna halkii filim sameyntiisa ku qaadataa 95 Lakh ilaa 90 Lakh.
Tamannaah Bhatia: xidigtaan caanka ah halkii filim sameyntiisa waxay ku qaadataa 75 Lakh ilaa 90 Lakh atariishada ayaa hadda waqti wacan ku jirta maadaama filimkeeda ugu dambeeyay ee f2 fun and frustration uu blockbuster noqday hadana waxa ay dhawaan soo wadaa filimka Queen ee Hindiga ah asigoo dib loo sameenayo.
Kajal Aggarwal: quruxleydan sanadkii hore ayay u dabaal dagtay 10-sano oo ay fanka Koonfurta ka tirsan tahay sidoo kalena sanadkii hore ay guuleystayn labo filim kuwaaso kala ah mla iyo kavacham
Laakiin Kajal sidii hore uma dar dar badno waxayna halkii filim sameyntiisa ku qaadataa 75 Lakh ilaa 80 Lakh lacago u dhaxeeyo.
F.G: Warbixintaan Shabakada Bollywood Life Ayaan Kasoo Xiganay…..